ဤရွေ့ကားတေလာဆွစ်ဖ်၏ရိုးရာမှအကောင်းဆုံးသီချင်းစာသားများဖြစ်သော UNI LIFE ကိုသာဖော်ပြသည် - သတင်း
ဤရွေ့ကားရုံ uni ဘဝကိုအကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ရိုးရာကနေအလွန်အကောင်းဆုံးသီချင်းစာသားများဖြစ်ကြသည်
ငါတို့ ၂၀၂၀ ဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့မှောင်မိုက်ခြင်းလို့ထင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲတေလာဆွစ်ဖ်က ၂၄ နာရီကြိုတင်အသိပေးမှုနဲ့သီချင်း ၁၆ ပုဒ်ကိုထုတ်ခဲ့တယ်။ ထိုသို့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ရိုးရာပုံပြင် တေလာဆွစ်ဖ်၏အstudio္ဌမစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီးသူမသည်အလွန်အောင်မြင်သောအယ်လ်ဘမ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မပြည့်သေးပါ ချစ်သူ ။ ကြာသပတေးနေ့ကသူမ၏ Instagram တွင်အယ်လ်ဘမ်ကိုကြေငြာခဲ့ပြီးသူမကယခုနွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်စီစဉ်ထားသောအရာအများစုမှာဖြစ်ပျက်ခြင်းများမဖြစ်ပွားခဲ့ဟုဆိုသည်။ သို့သော် DID တွင်ကျွန်ုပ်မစီစဉ်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ထိုအရာသည်ငါ့ 8 ဖြစ်ပါတယ်thစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်, ရိုးရာ။
ငါဒီနွေရာသီမှာစီစဉ်ထားတဲ့အရာတော်တော်များများဟာဖြစ်ပျက်မှုတွေအဆုံးသတ်မသွားဘူး၊ ထိုအရာသည်ငါ၏ 8th စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်၏။ အံ့အားသင့်စရာ - ညသန်းခေါင်မှာညနေခင်း၊ ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့တွေးတောဆင်ခြင်မှုတွေအားလုံးကိုငါသွန်းလောင်းလိုက်တဲ့သီချင်းအသစ်တစ်ခုလုံးကိုငါထုတ်ဝေတော့မှာပါ။ ငါဒီဂီတကိုသီးခြားစီရေးသားပြီးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သီချင်း (၁၆) ထဲက ၁၁ ခုကိုပူးတွဲရေးသားထုတ်ဝေတဲ့) @bonardner ရဲ့ငါ့ရဲ့သူရဲကောင်းများနဲ့ပူးပေါင်းရတယ်။ ငါနှင့်အတူ), ဝီလျံ Bowery (ငါနှင့်အတူနှစ် ဦး ပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်သူ) နှင့် @jackantonoff (အခြေခံအားဖြင့်ဂီတမိသားစုဖြစ်သော) Serban Ghenea နှင့် Jon Low တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော Laura Sisk နှင့် Jon Low တို့ကအင်ဂျင်နီယာ။ အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ဓာတ်ပုံများအံ့သြဖွယ် @bethgarrabrant အားဖြင့်ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ ယခုနှစ်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည် 'စုံလင်သော' အချိန်၌ဤတေးဂီတကိုမည်သည့်အချိန်၌ထုတ်လွှင့်မည်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေသည့်အချိန်ကာလကဘာမျှအာမခံချက်မရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အားသတိပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အူကပြောတာကမင်းကသင်ချစ်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်မိလျှင်၊ ဒါကငါနှင့်အတူဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ရနိုင်မသေချာမရေရာ၏ဘေးထွက်ပါပဲ။ မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်♥️
မျှဝေသည် တေလာဆွစ် (@taylorswift) PDT သည် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂၃ ရက်၊
ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်မှာ Netflix ရဲ့ပြသနာတွေကိုကြည့်ပြီး TikToks ကိုလုပ်ပြီးမကြာခဏငါတို့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့ငှက်ပျောသီးပေါင်မုန့်ကိုဖုတ်နေတုန်းအတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တေလာဆွစ်ဖ်ကသီးခြားစီနေတုန်းအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုလုံးကိုရေးခဲ့တယ်၊ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ယခု၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာကုန်ထုတ်စွမ်းအားပါပဲ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်တေလာဆွစ်ဖ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတေးရေးဆရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရိုးရာပုံပြင် ငါတို့ဟောင်းနွမ်းနေသောငို၊ ရယ်မောရန်နှင့်မုန်းရန်လှည့်စားနေသောလိုင်းအချို့ကိုထပ်မံပေးသည်။ ပျမ်းမျှကျောင်းသားသည်အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ရနိုင်သည့်အချို့သောအရာများပင်ရှိသည်။
တေလာဆွစ်ဖ်က ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောကြောင့်သီချင်းတစ်ပုဒ်စီတိုင်းမှအကောင်းဆုံးနှင့်အသင့်တော်ဆုံးလိုင်းများစာရင်းဖြစ်သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအေးမြ shit လုပ်နေ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်စွန့်စားမှုရှိခြင်း, သငျသညျအင်တာနက်ပေါ်မှာမိန်းမအချို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သူမ၏အိမ်သို့ယူကဒီအိပ်မက်မက်
ငါတို့အများစုဟာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပြန် Tinder အပေါ်သူတို့ရဲ့ exes အကြောင်းကိုအိပ်မက်ဆိုးရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အပေါ်ရွေ့လျား, ထိုသို့ပျော်စရာမဟုတ်ပါဘူး။
ပုံလှလှလေး English Lit ကျောင်းသားများအနေဖြင့်သင်၏နောက်နှစ်လယ်တွင်သင်အလိုရှိပါလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေခံသည်၊ သို့သော်အိမ်တွင်ယင်းကိုမကြိုးစားပါနှင့်။ သင်အမှန်တကယ်နှောင့်အယှက်အိမ်နီးချင်းများရှိပါကရင်တောင် သင့်ရဲ့အိမ်ရင်ြကကျေနပ်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး
သငျသညျအထဲကထွက် seein, ယခုငါပြည်ပရောက်ပေါ့, သင်သည်ငါ၏မြို့ခဲ့ကြသည်
Peter Mathieson ကထွက်ခွာသွားရန်ပြောသောအခါမတ်လကနောက်ပြန်လှည့်သွားသည်။ ပကတိချမ်းတုန်။ ငါတို့သင်တို့ကို Edi လွမ်းတယ်!
ငါကျေးဇူးတော်နှင့်အတူသွားကြဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, သင်မျက်နှာချွေတာ, ပတ်ပတ်လည်ပျံသန်းသူရဲကောင်းပါပဲ
သငျသညျ pres မှာရိုက်နှက်ရခြင်းနှင့်ကလပ်သို့မရကြဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဒါခေါ်မိတ်ဆွေများကသူတို့ကသင့်ကိုမသိနှင့်ဖြောင့်လမ်းလျှောက်ဟန်ဆောင်တဲ့အခါငါခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါမေ့လျော့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ရိုးရာအစဉ်အလာတွင်စံချိန်တွင်သီချင်း ၁၆ ပုဒ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deluxe ထုတ်ဝေမှုများတွင်ရေကန်ဟုခေါ်သည့်အပိုဆုကြေးတစ်ခုပါလိမ့်မည်။ ဒီဟာကကျွန်တော့်ရဲ့ ၈ ခုမြောက်စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လို့တစ်ပါတ်အတွက်ရနိုင်တဲ့ Deluxe CD edition နဲ့ 8 deluxe vinyl edition ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ Deluxe ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုစီမှာထူးခြားတဲ့အဖုံးများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အနုပညာလက်ရာများရှိသည်။ taylorswift.com တွင်သီးသန့်ရရှိနိုင်သည်
တူညီတဲ့တေလာ! uni သို့မလာမီမီးတောက်နှင့် Chillys ရေပုလင်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဆိုပါစို့။ Edi ငါမှသဘာဝတိုးတက်မှု၏မျိုးကိုသာရည်မှန်းနိုင်ဘူး။
ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တ ဦး အဖြစ်ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါကစိတ်ပူစရာမလိုလောက်ပါ။ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရွှင်လန်းမှုက x ငိုနေသောသားများ
လတ်ဆတ်သောအပတ်သို့ Flashback ပြန်သွားပါကသင်အခန်းထဲတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်မိန်းကလေးများအားတစ်ချိန်ချိန်တွင်ထွက်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုအာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမျတျော၌ celebrity ဘဝတွေကို
အထီးကျန်ဆန်နေသည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးသည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားပြီးဤအယ်လ်ဘမ်သည်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘောပင်တစ်ချောင်းကောက်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ သမိုင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲသို့ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤပုံပြင်များကိုကျွန်ုပ်ရထိုက်သမျှအကောင်းဆုံးသောသူတို့အားချစ်ခြင်း၊ အံ့, ခြင်း၊ ယခုသူတို့ကိုသူတို့ကိုဆင်းသွားသင်မှတက်ပါပဲ။ ရိုးရာအစဉ်အလာထွက်လာပြီ : ဗက် Garrabrant
မျှဝေသည် တေလာဆွစ် (@taylorswift)၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်၊
S o ငါ့စွမ်းရည်အားလုံးလိုပဲငါဖြုန်းတီးခဲ့တယ်
ဒီအခြေခံအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ် ဦး အဖြစ်ဘဝအကျဉ်းချုပ်သည်မဟုတ်လော
ဤသူသည်သင်တို့မနက်ဖြန် Hive မှအတူသင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်မဟုတ် - ဒါ - ကြီးမြတ် - ယခု - ကြောင်း - ငါ - သမ္မာသတိရှိကြလော့ကောင်လေးပြောပြအရာဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲ။
မမြင်ရတဲ့ string ကို
အချိန်, ဆန်းကြယ်သောအချိန်, ငါ့ကိုပွင့်လင်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒဏ်ငွေငါ့ကိုအနာရောဂါငြိမ်းစရာ
သင်၏ရူပဗေဒဟောပြောပွဲများသို့သွားရန် (၉) ဒေါ်လာပေးဆပ်နေပါသလား။ တေလာကဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်နှောင့်ရှက်မနေပါနဲ့။
မင်းအဆုံးသတ်ကိုပြောင်းဖို့မင်းကြိုးစားခဲ့တာငါသိတယ်ပေတရုက Wendy ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ #cardiganMusicVideo သည်ယခုထွက်သွားပါပြီ။
မျှဝေသည် တေလာဆွစ် (@taylorswift) ဇူလိုင်လ 23, 2020 တွင် 9:08 pm တွင် PDT မှာ
သင်၏နှလုံးကိုဖောက်ပြန်စေသောဘော်ဒါကျောင်း၏ကျောင်းသားဟောင်းအတွက်အလွန်လက်စားချေခြင်း။ ဒါမှမဟုတ်နယူးယောက်ရှိသူ့အိမ်ကိုသွားပြီးဥဥ egg ဖိတ်နိုင်သည်။
ထွက်ရှိအပေါငျးတို့သသမိုင်းကျောင်းသားများအတွက်တစ်ခုမှာ, ဒီသီချင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း Guadalcanal မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်တေလာရဲ့အဘိုးရဲ့အတွေ့အကြုံ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်, ထိုသို့နှလုံးကြေကွဲပါပဲ။
taylorswift.com - Beth Garrabrant တွင်ရရှိနိုင်သည့် Deluxe CD ထုတ်ဝေမှု ၈ ခု၊ Deluxe ဗီနိုင်းထုတ်ဝေမှု ၈ ခုနှင့်ကက်ဆက်ထုတ်ဝေသည့်ရိုးရာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများရှိအပိုဆုသီချင်းများကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
မျှဝေသည် တေလာဆွစ် (@taylorswift) ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုf*** လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဥယျာဉ်ဆီခေါ်သွားဖို့ပြောမလား။
တောင်းဆိုသူသည် Pollock ကောင်လေးဖြစ်လျှင်ပထမတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အခုတစ်ခုပဲနာတယ် ဒါကြောင့် T-Swift ရဲ့သောကြောင့်, ငါကအကြောင်းပင်အရူးမဟုတ်ပါဘူး။
•ဤတွင်သင်တစ်ချိန်ချိန်နှင့်အတူရရန်ခညျြနှောငျအားလုံး Edi Uni ယောက်ျားလေးများတစ်လှည့်လည်ပါတယ်
• David Attenborough က Edinburgh သတ္တဗေဒကျောင်းသားများအားစာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အပြာရောင် Planet နောက်ပိုင်းကတည်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်